February 23, 2021 1140
हिले देशका अधिकांश ब्यूटी पार्लर बन्द छन् । घरबाहिर निस्कन पनि मुस्किल छ । तर शरीरमा अनावश्यक रौं आएर हैरान हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने चिन्ता नलिनुस्, ब्यूटीसियन नीरु श्रेष्ठले घरमै अनावश्यक रौं हटाउने केही उपाय दिएकी छिन् ।
उनको सुझाव यस्तो छः
१) घरमै ट्वीजडको सहारामा अनावश्यक रौं हटाउन सकिन्छ । टुइजर्डबाट रौं हटाउनाले अधिक दुखाइ हुनेछ, छाला पनि रातो हुनेछ तर यसलाई रोक्ने उपाय पनि छ । त्यसका निम्ति, आइब्रो गर्नुअघि तल्लो सतहमा पाउडर लगाउनुहोस् र आइब्रो गरिसकेपछि मज्जाले मोइश्चराइजरले ३ देखि ५ मिनेट मसाज गर्नुहोस् ।यो १५ देखि २० दिनको अन्तरालमा मात्रै गर्नुहोस् । छिटो छिटो गर्दा छालामा चाउरी पर्ने सम्भावना हुन्छ ।
३) मोम छैन भने घरैमा यो बनाउन सक्नुहुन्छ । पानी तताउनुहोस्, यसमा चिनी मिसाउनुहोस र मज्जाले नपाकेसम्म पकाउनुहोस् ।त्यसपछि ग्याँस बन्दगर्नुहोस् । जब मिश्रण सुनौलो रंगमा परिणत हुन्छ तब यसमा कागतीको रस थप्नुहोस् । मिश्रण चिसो हुन दिनुहोस् । जब यो चिसो हुन्छ तब यसलाई थोरै परिमाणमा लिनुहोस् र छालामा फैलाउनुहोस् । यसलाई मोम स्ट्रिप जस्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ । जसले तपाईंको अनुहार र हातखुट्टामा भएका अनावश्यक रौं सहजै निकाल्न मद्धत गर्छ ।
Prevकलेजो बिग्रीएको ५ संकेत यि हुन हेर्नुहोस !! सेयर गरौ